Guddoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa maanta ku dhawaaqay in ay kordhinayso shuruudda maaskaro ee g | KWIT
Somali News 12.09.2020
Sida ku xusan bayaanka caafimaadka bulshada ee hadda jira, dadka reer Iowans waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha dhexdooda ah. Taasi waa haddii aysan awoodin inay bulsho ahaan ka fogaadaan kuwa ka baxsan gurigooda in ka badan 15 daqiiqo.
Kulamada gudaha ayaa ku kooban 15 qof, halka kulamada bannaanka lagu soo koobay 30. Makhaayadaha iyo baararka waa inay sidoo kale soo saaraan wicitaankii ugu dambeeyay illaa 10-ka habeennimo.
Reynolds ayaa sheegtay inay kordhinayso ku dhawaaqista hal usbuuc kaliya sababtoo ah Iowa waxay aragtay hoos u dhac ku yimid heerarka waxtarka, cudurada cusub, iyo isbitaalada. Laakiin waxay sheegtay inay ka fiirsanayso inay sii kordhiso iyaga.
Weli waxaan haynaa wadooyin dheer oo aan ku tagno isbitaaladeena, laakiin waxay arkayaan xoogaa nasasho ah. Waxaan idhi intii hore oo dhan waan wacayaa dib ayaananu u wici doonaa sida ku habboon. Taasina waa isla wixii aan qabanay bilowgii cudurka faafa.
Baahinta cusub ee caafimaadka bulshada ayaa dhaqan galaysa ilaa iyo 16ka bisha Diseembar.
Iowa waxay ku dartay 123 kale oo la xiriirta coronavirus maanta, taas oo kordhisay tirada dhimashada gobolka ee 3,021, sida laga soo xigtay diiwaanka caafimaadka bulshada ee gobolka.
Tirinta ayaa sii kordheysa iyada oo heerarka isbitaal dhigida, in kasta oo ay aad uga hooseyso usbuuc ka hor, weli wey sarreeysaa iyadoo 900 oo qof la dhigey cusbitaalka isla markaana 111 COVID-19 bukaan ah la dhigey 24-kii saac ee hore.
Degmada Woodbury, waxaa jiray 65 kiis oo dheeri ah oo la soo sheegay 24-kii saac ee la soo dhaafay. Laga bilaabo maanta, tirada dhimashada ee la soo sheegay waxaa laga soo qaatay dashboardka IDPH https://coronavirus.iowa.gov/.